WARBIXIN: Khabiirada Barnaamijka Soccer Saturday Ee Sky Sports Oo Qiimayn Ku Sameeyay Tababarayaasha Lixda Kooxood Ee Waa Wayn Ee Horyaalka Premier League. – GOOL24.NET
February 24, 2018 Mahamoud Batalaale
Afarta khabiir ee barnaamijka Soccer Saturday ee Sky Sports ka baxa ayaa looga bartay in ay sameeyaan doodo, qiimayno iyo falanqayn la xidhiidha kubbada cagta, waxayna ka mid yihiin dadka sida gaarka ah loogu ixtiraamo ka talo bixinta kubbada cagta gaar ahaan horyaalka Premier League.
Barnaamijka Soccer Saturday oo ka mid ah kuwa ugu fiican ee Sky Sports ka baxa ayaa lagu qaadaa dhigaa dhacdooyin muhiim ah, wuxuuna barnaamijkani kulmiyaa afarta khabiir ee kala ah Paul Merson, Phil Thompson, Matt Le Tissier iyo Charlie Nicolas.
Haddaba shabakada Gool24,net ayaa halkan idiinku soo koobaysa qaabka ay afartan khabiir u qiimeeyaan lixda tababare ee kooxaha waa wayn ee Premier League iyada oo mid kastaaba uu si gaar ah u soo xushay sida ay xili ciyaareedkan u kala fiican yihiin lixda tababare ee kala ah Jose Mourinho, Antonio Conte, Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Arsene Wenger iyo Mauricio Pochettino.
Khabiir kastaaba waxa uu kaalinta kowaad ku qiimeeyay macalinka uu u arko in uu shaqo fiican soo qabtay halka uu kalinta lixaad siiyay kan uu arko in uu shaqada ugu liidata qabtay marka la barbar dhigo tababarayaasha waa wayn ee uu la tartamyo.
Haddaba halkan kaga bogo qiimaynta khabiirada Sky Sports ee lixda tababare ee kooxaha horyaalka Premier League ugu waa wayn iyo kaalmaha ay kala galeen.
QIIMAYNTA PHIL THOMPSON:
5) Jurgen Klopp
6) Arsene Wenger
QIIMAYNTA PUAL MERSON:
2) Jurgen Klopp
3) Mauricio Pochettino
QIIMAYNTA CHARLIE NICHOLAS:
5) Jose Mourinho
6) Antonio Conte
QIIMAYNTA MATT LE TISSIER
3) Antonio Conte
4) Mauricio Pochettino
Sida aad aragtay afartan khabiir ayaa isku raacay in Pep Guardiola uu xili ciyaareedkan yahay macalinka horyaalka Premier League ugu fiican taas oo ka caawin karta in ku guulaysto abaal marinta tababaraha sanadka ee horyaalka Premier League ugu fiican inkasta oo uu sanadkiisii labaad oo kaliya uu ku qaadanayo Premier League.
Arsene Wenger ayaa noqday kan xili ciyaareedkan ugu xun isaga oo saddex khabiir qiimayntooda kaalinta lixaad ka galay halka Jose Mourinho, Antonio Conte, Klopp iyo Mauricio Pochettino ay inta badan ku jiraan kaalmaha labaad, saddexaad afraad ama shanaad marka laga reebo in Nicolas uu kaalinta lixaad dhigay Conte.
Haddaba akhriste, adiga ahaan haddii aad qiimayn gaar ah ku samayso lixda tababare ee kooxaha waa wayn ee Premier League siday noqon lahayd?
6) Arsene Wenger sidaan ayaa sax ah
Abu Muzzamil says:
Sida muuqata Guardiola ayaa lkn waxaa jira macalimiin shaqo
Fiican soo qabtay sida Klopp Iyo Pochettino.
Aniga ahaantaydana waa sidatan:-
MuDane Ganeesh says:
pep Guerdiola waa
uu Qalamaa sanadkan Macalinka uGu Wacan 20118